Faysal Cali Waraabe Oo Si Cad U Shaki Galiyey Musharraxnimada Jamaal, Sheegayna In Lagu Tartami Doono | FooreNews
Home wararka Faysal Cali Waraabe Oo Si Cad U Shaki Galiyey Musharraxnimada Jamaal, Sheegayna In Lagu Tartami Doono
Faysal Cali Waraabe Oo Si Cad U Shaki Galiyey Musharraxnimada Jamaal, Sheegayna In Lagu Tartami Doono
“Markaad Leedihiin Faysal Isbahaysigii Buu UCID Ka Iibinayaa Anigaad Meel Igaga Dhacaysaan Ee Hala Is Ixtiraamo”
Hargeysa (Foore)- Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa sheegay inuu xaq u leeyahay inuu u tartamo musharaxnimada xisbiga UCID isaga oo ku dooday in dadka faafinaya wararka ku saabsan inuu tartamayo ay yihiin kuwo ka cabsanaya inuu la tartamo. Dhinaca Kale Faysal Cali Wabaare waxa uu si cad u sheegay in aanu jirin Musharrax sharci ah oo xisbiga UCID wakhtigan leeyahay
Eng Faysal Cali Waraabe, wuxuu sidoo kale sheegay inaanu xisbiga waxba ku tarayn musharaxii madaxweyne xigeen ee iska casilay dhawaan Aqoonyahan Cabdirashiid Xasan Mataan isagoo yidhi: “Wuxuu ahaa nin marti ah oo si fudud noogu yimid ee ha naga tagee naga daa muxuu nagu tarayay.” Eng Faysal waxa uu sidoo kale sheegay inaanu jirin sharci odhanaya musharaxnimada Ucid shakhsi ayay u xidhan tahay. Waxa uu iftiimiyay in lagu tartami doono jagooyinka musharaxa iyo musharax kuxigeenka ee xisbiga Ucid, maadaama buu yidhi dib loo qiimaynayo xisbiga, lagana fikirayo suurto galnimada inuu ku soo baxo doorashada 2017-ka.
Mudane Faysal oo shalay warbaahintu kula kulantay Huteel Ambasaddor isaga oo dalka ka sii dhoofaya ayaa yidhi: “Maanta ayaan dalka ka dhoofayaa. Waxaan u socdaa caasimadda wadanka Angola ee Luanda. Halkaasi oo aan kaga qayb galayo shir 27-ka iyo 28-ka ka dhici doona. Waa kulankii ay isugu iman jireen xisbiyada Socialist ahi. Marka aad leedihiin Faysal Cali Waraabe xisbiga wuu iibinayaa aniga ayaad meel igaga dhacaysaan waxaana muhiim ah in la is ixtiraamaa. Xisbigu waa xisbi dimuquraadi ah. Khilaaf iyo qalalaase toona kama dhex jiro. Xisbi kastaaba marka doorasho soo dhawaato qiimayn ayuu isku sameeyaa golaha dhexe ayaa lagu xisaabtamaa. Waad arkayseen wixii KULMIYE ka taagnaa. Xisbigu waa xisbi lagu tartamayo. Ma jirto qof loo xidhay waan alagu tartamayaa. Imika wax musharrax ahi ma jiro waa ku tala gal, waxa uu sharci noqonayaa marka Golaha dhexe lagu tartamo ee ugu dambayn dawladdu kaadhkii sharciga ahaa ee Musharraxnimo siiso. Imika wax Musharrax ahi ma jirto, way iman kartaa in aan anigu Musharrax noqdaa. Illaa imika cid tidhi Musharrax ayaan ahay oo aan ahayn Jamaal ma jirto, waa la is qiimayn doonaa xisbiguna waxa uu isku qiimayn doonaa yaa meel inna gaadhsiinaya doorashada 2017” ayuu yidhi Faysal Cali Waraabe.
Previous PostDood Ka Dhalatay Ammaantii Xildhibaan Obama U Jeediyay Wasiir Samsam, Kharashkii Ay Ka Caawisay Iyo Wasaaraddaha Karbaashku Ku Dhacay Next PostAkhriso Khudbaddii Guddoomiye Cirro Ka Jeediyay Munaasibadii Waddani Ku Soo Bandhigay Barnaamijkiisa Siyaasadeed